လဖိုင်| December 12, 2012 | Hits:1
| | ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့အနီး ဗလမင်းထင် တံတားပေါ်တွင် လုံခြုံရေး ယူထားသော စစ်သားတဦးကို ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
Sai Linyone December 12, 2012 - 12:00 pm Unbelievable. The government does not need to be aggressive like this. This is very much illogical. Teenagers deserve to get education. Labeling them as enemies will not solve the Kachin-Burmese problem. Let him live his life.
Reply ရှော့ဒါလီ December 12, 2012 - 9:31 pm KIA စစ်သား ဖြစ်တော့ကော ဘာဖြစ်လဲ … သူပုန်မဟုတ်ဘူး … ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးအတွက်တောင်းဆိုနေတာပဲ
Reply sai sai December 14, 2012 - 9:27 am KIA မှ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော “ရူမီနှင့်ညီအစ်ကို” စက်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်သို့ ပေးပို့လိုက်သည့် စာ ??? ဘာစာလဲ ???